सुदृढ र एकतावद्ध पार्टी बनाउने दायित्व पूरा गछौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सुदृढ र एकतावद्ध पार्टी बनाउने दायित्व पूरा गछौं
सुदृढ र एकतावद्ध पार्टी बनाउने दायित्व पूरा गछौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता May 1, 2019	0 141 Views
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा संगठन कमिटी दाङका अध्यक्ष
पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रवीच पार्टी एकता भएको एक वर्षपछि जिल्ला कमिटी नेतृत्व टुंगिएको छ। पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा जिल्ला नेतृत्वको घोषणा गरिएपछि दाङमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेतृत्व पाएको छ। तर जिल्ला कमिटीले पूर्णता भने अझै पाएको छैन। जिल्ला कमिटीको विस्तार, एकीकृत पार्टी निर्माण र नेकपाका नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन एवं स्थानीय सरकारको निगरानीका विषयमा भर्खरै मनोनीत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्कासग युगबोधकर्मी जे.एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा प्रस्तुत गरिएको छ। –सम्पादक
नेकपाको नेतृत्व पाउदा आफैले चाहि कसरी लिनुभएको छ ?
दुईवटा पार्टी एकीकृत भइसकेपछि पुरानो अध्यक्षका नाताले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व दिने जुन निर्णय ग¥यो पार्टीले मेरो लागि त यो ऐतिहासिक नै हो। एकीकृत पार्टीको नेतृत्व र जिम्मेवारी पाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो।
जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन कति समय लाग्ला ?
यही बैशाख २७ मा पाच नं. प्रदेशका सबै सचिव र अध्यक्षहरुको शपथग्रहण ह“ुदैछ। २८ गते प्रदेश कमिटीको बैठक पनि हु“दैछ। त्यो बैठकले जिल्ला कमिटीको अन्तिम टुंगो लगाउछ।
ढिलो त हुँदैन ?
हु“दैन। पहिला जस्तो होइन। अब विवाद पनि केहीमा छैन। अहिले दुईवटा पार्टी एकताको विधि निर्माण भएको छ। सोहीअनुसार अध्यक्ष सचिव टुंगिएको हो र सदस्यहरुका लागि पनि यसअघि नै दुईवटै पार्टीका तर्फबाट संख्या निर्धारण भइसकेको छ। जिल्ला कमिटी एक सय ५५ सदस्यीय हुने र पूर्व एमालेबाट ८५ र पूर्व माओवादीबाट ७० जना रहने छन्। त्यो पनि पूर्व कमिटीकै सदस्यहरु रहने र तोकिएको संख्या भन्दा धेरै भए घटाउने र नपुग भए वरिष्ठहरुलाई समावेश गर्ने भन्ने विधि बनेकाले अब समस्या छैन। वैशाख २८ गते नै जिल्ला कमिटीको टुंगो लाग्छ र सार्वजनिक गरिनेछ।
धेरै भए फाल्न र नपुग्दा थप्न फेरि भागवण्डा नै हुनेहोला ?
त्यस्तो हु“दैन। बरु हामीलाई विभिन्न पार्टीबाट आउनु भएका साथीहरुलाई निर्वाचनताका विभिन्न जिम्मेवारी दिएका थियौं। उहा“हरुसहित पूर्वएमालेबाट हामीले जिल्ला कमिटीका लागि एक सय २९ जना सिफारिस गरेका थियौं। पूर्वमाओवादीबाट ७० जनाको सिफारिस गरिएको छ। यो हिसावले धेरै साथीहरु छुट्ने देखिन्छ। उहा“हरुलाई अन्य कमिटीहरुमा जिम्मेवारी दिने योजना बनाएका छौं।
पुराना र पार्टीमा पसिना बगाएकाहरु कोटामा नपर्ने सम्भावना धेरै होला होइन ?
त्यस्तो होइन। पार्टीमा योगदान पु¥याएका नेतृत्वहरु जस्तो मेघबहादुर विसी, दामोदर अधिकारीलगायत थुप्रै पुरानो पंक्ति छ। उहा“हरुलाई पार्टीले माथिल्लो तहमा जिम्मेवारी दिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामीले सिफारिस गरेका पनि छौं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्वको पंक्ति बाहिर रह“दा हामीले दुईवटा कुरा सोचेका छौं। पहिलो त जस्तो शोभाराम बस्नेत, मेघबहादुर विसी, छविलाल ओली, नारायण आचार्यलगायतको ठूलो पंक्तिलाई केन्द्रीय सल्लाहकारको रुपमै पठाउनुपर्छ भनेर पहिले सिफारिस गरेका छौं। हामी अहिले पनि सिफारिस गर्छौं। त्यसपछिका अन्य थुप्रै अग्रजहरु हुनुहुन्छ उहाहरुलाई प्रदेश सल्लाहकारका रुपमा जस्तो सेनराज शाह, ढुंडीराज लामिछानेलगायतका दर्जनौं अग्रजहरुलाई त्यहा“ सिफारिस गर्छौ र त्यसपछि पनि बाकी रहने अग्रजहरुलाई जिल्ला कमिटीको ५० प्रतिशत सल्लाहकार ल्याउनुपर्छ। हिजोका दुईवटै पार्टीका साथीहरुलाई समेटेर जिल्ला सल्लाहकार समिति बनाउ“दैछौं। त्यस्तै अर्को उपाय भनेको जिल्लाका अन्य तह स्तरका कमिटीमा केही साथीहरुलाई जोड्ने योजना छ। खासगरी दोहोरो जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरुलाई एउटा जिम्मेवारीमा राख्ने र अर्को जिम्मेवारीमा बा“की रहेका साथीहरुलाई दिने योजना छ। यद्यपि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले बनाएको नीतिअनुसार जिम्मेवारी लिनुभएका साथीहरुलाई एकल जिम्मेवारीमा ल्याउ“दा फेरि विधि तय गर्नुपर्ला। नेतृत्वले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ दोहोरो जिम्मेवारीले थुप्रै अरु काम गर्ने योग्य साथीहरु जिम्मेवारीबाट बञ्चित हुने र पार्टीलाई सहज रुपमा अघि बढाउन गाह्रो हुनेछ। यो कठिनाइलाई केन्द्रीय नेतृत्वले पनि बुझिदिनेछ भन्ने आशा छ। अहिलेको कमिटी संगठन कमिटी हो र सबैखाले निर्णय माथिबाटै निर्देशित हुन्छ। त्यसो हु“दा हामीले मात्रै भनेको हुन्छ भन्ने छैन।
तथापि पार्टी एकताको संक्रमणकाललाई परिणाममुखी बनाउने अवसर त तपाइ“हरुमा छ नि ?
चुनौती र अवसर दुबै छ। हामी दुईवटा बेग्लाबेग्लै स्कूलिङबाट आएका छौं। यी दुबै स्कूलिङका माध्यमबाट राजनीतिक संगठकका रुपमा रहेका सामाजिक अभियन्ताहरुबीचको एकता ह“ुदैछ। दृष्टिकोणको हिसावले पनि पृथक थियौं हामी। एउटा विचार सशस्त्र संघर्षबाट राज्य सत्ता कव्जा हुन्छ भन्ने थियो भने अर्को विचार ०४६ सालसम्म आइपुग्दा बलपूर्वक शान्तिपूर्ण जनविद्रोहबाट समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने थियो। हामी दुईवटै चिजको फ्यूजन गरेर पार्टी एकता गरेका छौं। विचार, दृष्टिकोण र कार्यदिशा समान भएका कारणले हामीवीच एकता सम्भव भएको हो। चुनौती छन् तर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट समाजलाई रुपान्तरण गर्ने हो। सामन्तवादी उत्पादन प्रणालीलाई नष्ट गरेर राष्ट्रिय पू“जीको विकास गर्दै समाजवादमा पुग्ने हो। र, समाजमा रहेको गरिवी, भोकमरी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव, कुरीतिहरुलाई अन्त्य गरेर न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अभिभारा हाम्रो का“धमा आइपुगेको छ। यो अभिभारा पूरा गर्न दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भइसकेपछि संगठनात्मरुले पनि भावनात्मकरुपले पनि एकता हुनुपर्छ। औपचारिक एकताले पुग्दैन। कार्यशैली, भावनात्मक र दृष्टिकोणले एकता हुनुप¥यो। र, आगामी दिनमा आर्थिक, सामाजिकरुपमा समाज परिवर्तन गर्ने अभिभारा छ जुन जनताले नेकपालाई दिए। यो पूरा गर्नका निम्ति केन्द्रदेखि तलसम्म पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, एकतावद्ध गर्ने हाम्रो का“धमा जिम्मेवारी आइपुगेको छ। हामीले यसलाई पूरा गर्नैपर्छ। हामीले आ–आफ्ना मान्यता राखेर संगठन चलाउन सक्दैनौं। अब त हामीस“ग एउटै चिज रहन्छ। कामको निम्ति एकता, दृष्टिकोणका निम्ति एकता, संगठनको निम्ति एकता। सबै हिसाबले सुदृढ र एकतावद्ध पार्टी बनाउने दायित्वलाई हामीले पूरा गर्छौं।
छुट्टा छट्टै स्कूलिङबाट आएकाहरुबीचमा भावनात्मक एकताका लागि नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
मैले सोच्या कुरा के हो भने पहिलो कुरा हामी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी थियौं। दुईवटा पार्टी थिए। आ–आफ्नै कार्यशैली थिए। ती कार्यशैलीहरु एकीकृत भइसकेपछि हामीले सोच्ने कुरा के हो भने पार्टीलाई कसरी खदिलो बनाउने ? कसरी गतिशील बनाउने ? पार्टीलाई आफ्नो भन्दा समाज परिवर्तनको सम्बाहक कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गरेर अघि बढ्छांै। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने त झन म अडान लिएर बस्ने मान्छे होइन। विगतमा तपाइ“हरुलाई थाहा छ। आफ्ना कुरा मात्र रहनु स्वाभाविक हो तर सबैका कुराहरुलाई मान्यगरी बीचबाट समन्वय गरेर अगाडि जाने स्वभाव छ। मेरो भूमिकै समन्वयकारी रहनेछ। वीन वीनको बाटोमा जाने मेरो आफ्नो पन हो । यसलाई मैले आगामी दिनमा पनि कायम राखेर जानेछु। किनभने मैले पूर्व एमाले खोजेर निर्णय गर्ने र पूर्व माओवादीका साथीहरुले पूर्व माओवादी खोजेर निर्णय गर्नुभयो भने त पार्टी एकताको अर्थ रहेन नि। तसर्थ पूर्व होइन नया“ जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीका केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका संगठन कमिटीहरुले एकसाथ काम गर्नुपर्छ। जसले यो समाजलाई समृद्ध बनाओस्। यो समाजमा रहेका विभिन्नखाले सामन्ती अवशेषको अन्त्य गरोस् र समृद्ध समाजको निर्माण गरोस् भन्ने दिशामा हामी जानुपर्छ। यो दिशामा जानका लागि पुराना पनहरु त्याग्ने, नया“ कार्यशैलीहरुलाई उपयोग गर्ने र पार्टीलाई गोलबन्द गरेर एकीकृत स्वस्थ र निरोगी पार्टी निर्माण गर्ने दायित्वलाई कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्ने प्रयास गर्नेछु।
दाङको पार्टीमा निकट र विकट हेर्ने पुख्र्यौली चलन सहजै छुट्ला र ?
समाजको वर्तमान चरित्र हो यो । अहिले पनि छ । भोलि पनि रहन सक्ला है। हाम्रो समाज निम्न पू“जीवादी समाज हो। यो समाजको चाहना के हो भने अरुभन्दा मैले धेरै प्राप्त गर्नसकू“ भन्ने हुनसक्छ। विधि, पद्धतिले प्राप्त गर्ने कुरा त सामान्य कुरा नै हो। विधि, पद्धति र आन्दोलनबाट प्राप्त गर्ने कुरा त परिणामको कुरा भो। तर विधि पद्धतिभन्दा मेरो नजिकको, मेरो साथी, मेरो आफन्त, मेरो नजिकको मान्छे भएको नाताले उसलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनोगतवादी शैली यदि हामीमा अहिले पनि रह्यो भने हामी केही गर्न सक्दैनौं। तर हामीले गर्ने के हो भन्दा हाम्रो र मेरो होइन, सिंगो आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने, साझा कार्यशैली चाहिएको हो। योग्य कार्यशैली भएका संगठकका रुपमा काम गर्नसक्ने व्यक्तिहरुलाई स्थापित गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसअघि म नेतृत्वमा आउ“दा गुटमुक्त पार्टी बनाउ“छु भन्या थिए“। मेरो गुटमुक्त पार्टी बनाएको दाबी पनि छ। यदि गुटमुक्त नबनाएको भए दाङमा निर्वाचनको नतिजा हाम्रो पक्षमा आउने थिएन। हाम्रो पार्टीप्रति जनताको माया, पार्टी नेतृत्वको राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नेतृत्वले मुलुक निर्माणमा खेलेको भूमिकाका कारणले लाखौं जनता पार्टीप्रति आकर्षित थियो। त्यो आकर्षणलाई हामीले जनतामाझ प्रस्तुत गर्न सक्यौं। कसरी यो सम्भव भयो त भन्दा पार्टीलाई एकीकृत गरेर, भावनात्मक एकतालाई सवल बनाएर निर्णयमा पुग्यौं र एक खालको सकारात्मक सन्देश घर–घरमा पु¥याउन सक्दा हामीले सफलता हात पारेका छौं। र, पार्टीलाई पनि पहिलो ठूलो बनाउन सफल भयौं। यो कल्पना र भावनामा बनेको होइन। एकतावद्ध प्रयासले भएको हो।
ठूलो पार्टी, तीन तहमै उसकै सरकार तर जनताले खोज्दा न पार्टी न त सरकार, केही भेटिदैनन् त ?
कसले कसरी खोज्नुभयो र भेट्नु भएन मलाई थाहा भएन। तर पार्टी छ र सरकार पनि छन्। सरकारको उपस्थिति छैन भन्नु मिथ्या कुरा हो। किनभने तीन तहको सरकारको उपस्थिति परिणाम दिनेगरी छ। केन्द्रीय सरकारले थोपरेको बोझमुक्त गर्दै देशको आर्थिक बृद्धिको दिशामा क्रियाशील छ। थिलोथिलो अवस्थाको आर्थिक स्थितिबाट देशलाई माथि उठाउन समय लाग्यो।
एकैचोटि विकास त सम्भव थिएन। यसपालि विकासका काम देखिनेगरी हुन्छन्। पहिलो वर्ष बोझबाट निस्किने र केही सिकाई, भोगाइका काम भए भने विकासका लागि आधार तयार गर्ने काम पनि भएका छन्। अब निर्माणको चरण शुरु भएको छ। तीनवटै तहले अब देखिने गरी काम गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्। जनताका चाहना एकैपटक पूरा गर्न सम्भव थिएन, छैन पनि। विस्तारै हुने हो। पहिलो एक वर्ष कहा“ के गर्ने भन्ने योजना निर्माण भएका छन्। आउ“दा वर्षमा सरकार रहेछ भन्ने महसुस हुनेगरी काम हु“दैछन्। बाटोमा सरकार छ, पुल पुलेसा निर्माणमा सरकार छ कहा“ छैन सरकार ? पा“च वर्षमा गर्ने काम एक वर्षमै बटन दबाएर हुनसक्छ र ? त्यसैले विस्तारै सरकार भेटिने र देखिने अवस्था आउ“छ। हो काम गर्दा कमी कमजोरी हुन्छन्। त्यस्ता कमी कमजोरी छन् भने सार्वजनिकरुपमा टिप्पणी गर्नुस् र सच्चिनका लागि दबाब दिनुस्। त्यो त हामीले खुलारुपमै भन्दै आएका छौं।
कमिशन र भत्तामै भुले जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्ता भनेकै छन् त जनताले, खै सच्चिएको ?
तपाईंले भन्या कुरा वर्तमान समाजको चरित्र हो। यतिबेला दलाल पू“जीवादी चरित्र छ र त्यो व्याप्त छ। हिजो सामन्तवाद थियो । त्यसको उत्पादन पद्धति थियो । आज दलाल नोकरशाह पू“जीवाद छ यसको चरम शोषण र उत्पीडन छ। दलाल नोकरशाह पू“जीवादले सरकारको माथिल्लो, दोस्रो र तेस्रो तहको सरकारसम्मलाई प्रभावमा पारेर सरकारलाई बदनाम गर्न चाहन्छ। अहिले तपाइ“ले हेर्नुभयो भने एउटा ठेक्कापट्टामा शुरुमै १० प्रतिशत कमिशन बुझाएपछि मात्रै उसलाई ठेक्का पर्छ। जति रकमले ठेक्का सम्पन्न हुने हो त्यसरी ठेक्का पाएको ठेकेदारले ५० प्रतिशत कममा ठेक्का हान्छ । अनि काम कसरी हुन्छ ? आज दाङमा पुलहरु समयमै किन बन्दैनन् भन्दा यही समस्या भएर हो। कम मूल्यमा काम गर्ने सिष्टम नै दलाल पू“जीवाद हो। हाम्रा नीतिहरु दलाल पू“जीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका छन्। अझ दलाली कहा“ छ भन्नुहुन्छ भने मालपोतमा जानुस् दलाल छन्, । खोलामा जानुस् दलाल छन्। उत्पादन क्षेत्रमा जानुस् दलाल छन्। किन यस्तो छ त भन्दा हाम्रो समाज र सिष्टम नै दलाल नोकरशाह पू“जीवादी चरित्रले गा“जेको छ। यसलाई रोक्ने भनेकै नेकपाले हो। यसका कार्यकर्ताले गर्ने हो। हामी लडाइ“मै छौं। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहस्तरबाट सरकारले काम गरिरहेका छन्। नीति परिवर्तन गरेर लडाइ“ तीब्र पारिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय संसदबाट त्यो खालका नीति नबन्दासम्म दलाल पू“जीवाद रहिरहन्छ। यसको अन्त्य गर्न सरकारको तर्फबाट र पार्टीका तर्फबाट लडाइ जारी छ र, पार्टीले अन्त्य गर्छ। पार्टीका कार्यकर्ताले अन्त्य गर्नेछन्।
तर नेकपाकै नेता, कार्यकर्ता ठेक्कापट्टादेखि खोलासम्म दलाली गरिरहेका छन् नि ?
नेकपा आफै होइन, नेकपाभित्रका कतिपय चरित्र छन् भने अब समाप्त भएर जान्छन्। आजको लडाइ“ यसमै छ। मैले माथि पनि भनें नीति नियम नै त्यस्तै छन्। ५० प्रतिशत विलो टेण्डरलाई स्वीकृत गर्ने नीतिजस्ता थुप्रै दलाल पू“जीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नियम बन्दासम्म समस्या छ। नीति पुरानै अनि रोकिएन भन्ने कुराको अर्थ हु“दैन। नीति नया बनाउने र नया हिसाबले काम गर्ने अवस्था आए यस्ता प्रवृत्ति आफै कम हुन्छ । भइरहेको पनि छ। यो रोकिन्छ।
यो कार्यकालमा नगरी नहुने काम के के छन् ?
पहिलो कुरा, अग्रजहरुको सम्मान गर्नुपर्छ। अग्रजलाई सम्मान गर्न सकिएन भने हामीलाई पछिल्लो पुस्ताले धिक्कार्ने नै छ। दोस्रो कुरा, सम्मेलन नहु“दासम्म हामीले कुसैलाई पनि आन्दोलनबाट विस्थापित हुने परिस्थिति ल्याउनुह“ुदैन। उहा“हरुलाई अनेक ठाउ“, अनेक मोर्चामा क्रियाशील गराउने काम गर्नुपर्छ। राजनीति व्यापार वा ठेक्कापट्टा होइन। यो सामाजिक सेवा हो। समाज सेवा गर्दाखेरी सबैलाई समदुरीमा राख्नुपर्छ। पुरानालाई सम्मान गर्ने, नया“लाई व्यवस्थित गर्ने र नवप्रवेशीहरुलाई पार्टीमा आवद्ध गर्ने। ठूलो पंक्तिलाई आन्दोलनप्रति, पार्टीप्रति विश्वास जगाउने, हामीस“ग भइसकेकाहरुलाई राजनीतिक, वैचारिकरुपमा अब्बल गराउने, अघि बढाउने र सुदृढ गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र पुरानाहरुको अनुभवलाई पार्टीको पू“जीको रुपमा क्यास गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। यदि यी काम मैले गरिन भने मलाई अरुले पनि गर्दैन। भोलि मैले लठ्ठी टेकेर हिड्ने बेलामा धिक्कार्ने बाहेक अर्को हु“दैन। माणिकलाल, नारायण गुरुहरुकै कारणले दाङमा कम्युनिष्ट बन्यो र हामी यो अवस्था छौं। हामी आफै उत्पन्न भएका त होइनौं। अशोक चौधरीहरु नभएको भए हामी कहा“ हुन्थ्यौं ? त्यसैले पहिलो काम इतिहासलाई सम्मान गर्ने। दोस्रो काम वर्तमानलाई व्यवस्थित गर्ने र तेस्रो काम नया शक्तिहरुलाई निर्माण गर्ने तथा पार्टी आकर्षणमा ल्याउने काम हुनेछ। पार्टीका नेता, कार्यकर्ताका कार्यशैलीका कारणले नेकपा नै भरपर्दो पार्टी हो भन्ने बनाउने काम हामीले गर्नुपर्छ।
Previous: क्यान महासंघको सूचना प्रविधि सम्मेलन
Next: स्वास्थ्य उपचारमा तितेकरेला र हरियो पुदिना